सरकारलाई डाक्टरहरुको पु’कार :- “अक्सि’जनसम्म त देउ ! हामी अझ धेरै बि’रामी बचा’उछौँ।” – Sadhaiko Khabar
सरकारलाई डाक्टरहरुको पु’कार :- “अक्सि’जनसम्म त देउ ! हामी अझ धेरै बि’रामी बचा’उछौँ।”
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: १४:४३:२९
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निजी अस्प’तालले अक्सि’जन आपूर्ति ठ’प्प हुन थालेकाले को’रोनाका बिरा’मीको उप’चार गर्न सम’स्या भइरहेको बताएका छन् । मंगलबार निजी अस्प’ताल संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश (अफिन) ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरा’मीको चा’प बढ्दै गइरहेकाले अक्सि’जन अभाव हुँदा उपचा’रमा स’मस्या भएको जनाएको हो ।
अफिन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष जनकराज जोशीले अक्सि’जन आपूर्ति नभए अब कोभि’डका बि’रामी भ’र्ना गर्न नसकिने बताएको छन् । ‘अक्सि’जन आपूर्ति पर्याप्त भएन भने आजैदेखि कोभि’डका बि’रामी भर्ना लिन नसकिने अवस्था आएको सबैमा जानकारी गराउँछौं’ उनीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कैलालीमा रहेका १० वटा निजी अस्पतालले आफूहरूसँग भएका श’य्याको २० प्रतिशत को’रोनाका बिरा’मीका लागि छुट्याएर उप’चार गर्दै आएको बताएका छन् । संघका प्रदेश अध्यक्ष जनकराज जोशीले अक्सि’जन अ’भाव हुँदा बिरा’मीको उप’चारमा सम’स्या देखिएको बताए ।
‘नियमित अक्सि’जनको आ’पूर्ति हुने भए २० प्रतिशत मात्रै होइन, सबै बे’ड दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अस्प’ताल भ’र्ना भएर आउने अधि’कांश बिरा’मीलाई अक्सि’जन चाहिन्छ । अक्सि’जन नै दिन नसक्ने भएपछि बिरा’मी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’( तस्विर:-फाइल)